Redirịba Atụmatụ na Okirikiri ala nke Rocky Ugwu | Netwọk Mgbasa Ozi
Na ederede gara aga anyị na-enyocha Ugwu Appalachian y ndị Himalaya. Nhazi usoro a bu ihe puru iche na puru iche na gburugburu uwa. Taa, anyị na-agagharị usoro ugwu ndị a na-arọ nrọ, nwegasịrị akụ na ụba dị iche iche na ihe ịrịba ama na mbara ụwa anyị ka dị ndụ. Ka anyị kwuo banyere ya Ugwu Rocky. Ọ bụ otu n'ime ugwu kachasị mkpa na America niile. Ọ dị n'etiti Canada na United States ma were ya dị ka azụ nke North America.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịma mkpa ọ dị n’Ugwu Rocky, ihe a bụ ọkwa gị.
2 Akụkụ ndị na-adọrọ mmasị
3 Olee otú e si nwee Oké Nkume?
N'ihi oke obibi obibi ya na ọnụnọ nke ihe dị iche iche dị na mbara igwe, e hibere gburugburu ebe a ịbụ National Park na 1915. Ọzọkwa, emesia, na 1984, UNESCO kwupụtara na ọ bụ World Heritage Site. Ọ bụkwa na n'ugwu ndị a ka e nwere ọtụtụ ihe omimi banyere ala banyere ntọala nke ụwa anyị dịka anyị si mara ya taa ma ọ bụ ebe obibi nke ọtụtụ puku ụdị.
O nwere nnukwu ogologo nke ihe dịka kilomita 4800, ihe dị ka. Obosara ya dị n’etiti kilomita 110 na 440 na akụkụ ya kachasị ukwuu. Ebe a si site na mgbago ugwu Alberta na British Columbia (ha abụọ dị na Kanada) ruo na ndịda New Mexico. Ọ gafere Osimiri Ugwu dị n’ọwụwa anyanwụ ma gafere ndagwurugwu na ala dị larịị n’ebe ọdịda anyanwụ.
E nwere ọtụtụ ugwu, n'ihi ya, ọ sara mbara ma sie ike ịmụ ihe. E nwere ugwu dịka Ọchịchị na Salish dị ịrịba ama. N'ịbụ ndị a kpọrọ aha dị ka Ebe Ihe Nketa Worldwa, a machibidoro ọtụtụ ọrụ akụ na ụba iwu. Emere nke a iji mee ka usoro okike dị mma.
Ugwu Rocky na-echekwa n'etiti oke ugwu ha kachasị elu na North America niile. Nke a bụ Ugwu Elbert. Ọ nwere elu nke mita 4.401. Ọnụ elu ndị ka dị n’akụkụ ugwu na-ejigide ọtụtụ glaciers ndị ka dị kemgbe ikpeazụ glaciation. Akpụrụ a nwere ihe ọmụma bara uru banyere ihu igwe nke ndị ọkà mmụta sayensị kwesịrị ịtụle nke ọma. Ọ dị mkpa inyocha akwa ice ndị a na-aga n'ihu nke etolitere ọtụtụ afọ iji nweta nkọwa zuru ezu gbasara ọdịdị ala anyị.
Akụkụ ndị na-adọrọ mmasị
N'ebe ugwu nke Rockies ị nwere ike ịnụ ụtọ ọmarịcha ịma mma nke ndagwurugwu dị warara ma dị omimi nke mebere kemgbe ọtụtụ nde afọ site na ọrụ glaciers. Mmiri na-aga n'ihu ma na-agbaze mmiri na-emepụta mmiri nke na-akpụ ala ma na-akpụ ndagwurugwu ndị anyị nwere ike ịghọta taa. Eziokwu bụ na ọ dị oke ọnụ ahịa inwe ike ịhụ ọdịdị ala ebumpụta ụwa nke etolite ogologo oge gara aga na ọ bụ naanị okike etinyela aka na ya.
N'ime akụkụ ndị kachasị adọrọ mmasị ịhụ na Rockies anyị hụrụ ụfọdụ osimiri ndị kachasị mkpa dị na North America niile. N'etiti ha anyị na-ezute Colorado River, Columbia na Bravo. Mmiri ndị a nke mmiri dị ọcha na-enye mmiri site na mmiri nke na-aga n'ihu na usoro nke oyi na thaing ahụ e kwuru n'elu. Nke a na-echetara anyị mkpa ọ dị agbaze nke glaciers dị ka nke a na ihu oke ịrị elu oke osimiri na oke mbibi nke enwere ike isi na nke a pụta.
N'ebe ala a, anyị enweghị ike ịhụ ugwu naanị, mana usoro ndị ọzọ etolitere site na ọrụ nke glacial, mpụga geological na meteorological. Na-aga n'ihu edinam nke mmiri ozuzo, ifufe, mgbanwe okpomọkụ, kefriza na thawing, wdg Ha na-akpụzi ọdịdị ala ruo ọtụtụ afọ ma na-enye nnukwu usoro usoro ọdịdị ala.
Olee otú e si nwee Oké Nkume?
Anyị na-ekwu maka otu esi akpụpụta usoro kachasị mma n’ebe ndị a. Ma olee otú e si malite usoro ugwu ndị a? Usoro a nke geological nke mere ka e nwee Rockies ka ndị mmụta ala gburugburu ụwa na-amụ ebe niile. O bukwa na ugwu ndia meputara na oge nke uwa diri ihe diri ala.
Igwe teknụzụ ahụ nwere ngagharị siri ike nke dugara n 'elu ugwu ahụ na nhazi ugwu. Ugwu Appalachian ahụ a kpọtụrụ aha n’elu ma kọwaa ya n’isiokwu ọzọ ka e hiwere site na nkukota nke Laurentia na Gondwana efere n'oge mbubreyo Carboniferous. Mgbe emechara na Eocene, nnabata miri emi miri emi emere n’okpuru akụkụ nke taa mebere ọdịda anyanwụ North America niile. Nmebe a na-eweliwanye eriri kọntinent na-etolite na nguzobe nke Rockies na-ewere ọnọdụ n'ụzọ doro anya karị.
O kwere omume na data sitere na omumu ihe bu eziokwu ma debe ugwu ndia afọ n’agbata nde 55 na 88. Maka nke a, anyị pụrụ ịhụ n’ihu anyị ebe mmadụ niile na-ahụ ihe ọdịnala nke aka mmadụ anaghị etinye aka na ya wee hiwe ya afọ 88 gara aga.
Mgbe nde afọ 60 gara aga, ozugbo e guzobere ha, ugwu ga-adị n'okpuru ndị na-ahụ maka mbara igwe na ihu igwe. N'ime ha ka anyị hụrụ oke okwute. A metamorphization ma nke anụ ahụ (n'ihi mgbanwe na-aga n'ihu na ọnọdụ okpomọkụ na mgbanwe nke oge) na kemịkalụ n'ihi nkwụsị nke ihe site na mmiri. Ọzọkwa, ifufe na mmiri ozuzo na-eme ka ala dị elu ma bụrụ nke mbuze.
Dịka anyị kwurula ọtụtụ oge na post a, e nwere ọtụtụ ụdị ma osisi na ahịhịa nke bi ebe ndị a. N'ebe mara mma nke tundra, mbara ala, oke ohia, ala ahịhịa, mmiri mmiri na ndị ọzọ ihe omuma dị iche iche nwere ike ibi na ọtụtụ ụdị na njikwa ụlọ obibi zuru oke.
N'ime umu nke anyi na ha bi mgbada, mgbada na-acha ọcha, ụda opi, coyote, agba aja aja, lynx Canada, na ewu ọcha.
Anyị na-ahụkwa ụdị ahịhịa dị iche iche na ahịhịa dị iche iche anyị hụrụ ponderosa fir, akpu, osisi alpine fir, n'etiti ndị ọzọ.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere Ugwu Rocky.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » ugwu Rocky
Ihe ihu igwe
Weatherdị ihu igwe